Atụmatụ ezumike na Tablet & Mobile Shoppers | Martech Zone
Monday, December 17, 2012 Monday, December 17, 2012 Jenn Lisak Golding
Anyị dijitalụ katalọgụ nkwusa ahịa, Zmags, mere n'oge na-adịbeghị anya nyocha banyere ihe àgwà ịzụ ahịa nke ndị ahịa ga-abụ oge ezumike a. Dabere na nsonaazụ ya, imirikiti ndị na-azụ ahịa ga-azụ ihe na mkpanaka ha na mbadamba mbadamba afọ a na ịzụta n'ime ụlọ ahịa ga-agbada. Digital katalọgụ bụ 2nd kasị ewu ewu na ụlọ ahịa na-aga mgbe weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị, nke a dị mkpa iche echiche ma mejuputa, ọkachasị n'ọtụtụ ngwaọrụ. Keyfọdụ isi nchoputa gụnyere:
Menmụ nwoke nwere ike iji mbadamba nkume na ekwentị iji zụta ihe karịa ụmụ nwanyị.
Ihe ngbaghara nke # 1 maka ndị na-eri ihe anaghị enwe ozi ngwaahịa zuru oke n'ịntanetị.
Azụmaahịa Facebook na-ebili na mbadamba / ekwentị mkpanaaka.
Ihe karịrị 50% nke ụmụ afọ 18-34 na-eme atụmatụ iji ngwaọrụ mkpanaka zụta oge ezumike a.
Kedụ ka ị ga-esi zụọ ahịa n’oge ezumike a? Gịnị bụ atụmatụ gị?
Tags: katalọgụ dijitalụoge ezumikeMobile na Mbadamba ụrọOtutu akambadamba
Ngwa Laptọọpụ UK
Dee 28, 2012 na 4: 51 AM
Ọzọkwa, ozugbo anyị mebiri mpempe akwụkwọ ahụ site na ngalaba nchekwa oyi ọhụrụ anyị malitere ibu ngwa a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ka anyị banye na ọnụọgụgụ.